Community Organizations - Quit Partner
Xirfadlayaasha Qabanqaabiyayaasha Bulshada
Isbadal Ka Samee Bulshadaada
Ka caawi Dadka aad u Adeegto Iska Joojinta Tubaakada Ganacsiga
Ururada bulshada oo ay ka mid yihiin guryaha shaqooyinka ah, meelaha cibaadada iyo xarumaha fayo-qabka waxay ka ciyaari karaan door firfircoon xagga caawinta ku xirida dadka barnaamijyada iyo ilaha Quit Partner ee lacag la’aanta ah. Ka sokow u soo gudbinta xubnaha bulshada Quit Partner, adiga iyo shaqaalahaaguba waxaad bixin kartaan taageero ama xitaa waxaa soo bandhigi kartaan siyaasado si aad u dhiirigelisaan iska joojinta.
Sida Loogu Soo Gudbiyo Qof Quit Partner
Caafimaad Ku Qabida Guriga Dhexdiisa
Milkiileyaasha guryaha shaqooyinka leh iyo maareeyayaasha waxay caawin karaan inay ka ilaaliyaan deggeneyaasha qiiqa sigaarka ee labaad (secondhand smoke) iyo waxyeelada isticmaalka tubaakada ganacsiga iyagoo fulinayo siyaasadaha tubaako-la’aanta. U soo gudbinta deganeyaasha Quit Partner ayaa ah hab aad u wanaagsan oo lagu caawiyo deggeneyaasha inay bilaabaan wadada iska joojintooda.
Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan Siyaasadaha Guryaha Sigaar-cabbis-La’aanta
War Gaarsiinta ku Saleysan Diinta
Hogaamiyaasha kaniisadaha, sunagogyada, masaajidaha iyo macbadyada waa qeyb la aamin sanyahay oo muhiim ka ah bulshadaheena waxayna siin karaan taageero xoog leh xubnaha doonaya in lagu caawiyo qaadista talaabooyinka ugu horeeya ee iska joojintooda.
Xarumaha Fayo-qabka Bulshada
Shaqaalaha goobaha isu-imaanshaha bulshada ee xoogga saara fayo-qabka ayaa caawin kara inay wax ka baraan xubnaha bulshada waxyeelada isticmaalka tubaakada ganacsiga oo ay ku xiraan dadka ay u adeegaan barnaamijyada taageerida ee iska joojinta.
Wada-hawlgalida si Loo Gaaro Isbadal Wanaagsan
Hay'adaha caafimaadka dadweynaha ee maxalliga ah iyo ururrada bulshada ee ka hela maalgelin Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH) ayaa si wadajir ah uga shaqeynaya yareynta isticmaalka tubaakada ganacsiga iyo xayeesiinta iska joojinta. Ogow waxa ku cusub bulshadaada oo isku xir ururadaas adigoo booqanaya linkiyadan.
Wada-Hawgalka Horumarinta Caafimaadka ee Gobolka oo dhan (Statewide Health Improvement Partnership - SHIP)
Barnaamijka Deeqda Bulshooyinka ee Tubaako-la’aanta (Tobacco-Free Communities Grant Program - TFC)
Barnaamijka Deeqaha Qabiilka
Ama dhalinyarada da’da yar/dhalinyarada qaangaarka ah ayaa u diri kara qoraalka “Start” lambarka: 36072*
*Da'aha 13-24 jir